MYU SHADAN: May 2013
Tsaw ra ai KIO/ KIA ginjaw salang ni chyoi hkra , na hkra , myit sawn lajang ya lu hkra ngu Dap ba (1) na myu tsaw mung tsaw hpyen la ni gaw shata kumhpa nlu hkap la ai laning mi jan sai lam hpe chye shangun mayu nngai law .Kaga Dap ba ni gaw shata kum hpa dingyang lu nga ma ai rai tim Dap ba (1) niashata kumhpa gaw kadai na ta hta hkring mat ai kun ? kadai she jahkring la tawn ai kun ? nga na myu tsaw nialapran hta jahta nga ma ai re .Kade wa nlaw la ai rai tim mung yawng lu la nga ai shata kumhpa re majaw Dap ba (1) bu ni mung lu ging na re ngu kam nga ma ai . Chyeju hte KIO/KIA ginjaw salang ni na ya nhtawm mai kaja ai hte lawan lajang ya na hpe lawu tsang myutsaw ni la
nga ma ai lam ndau dat ga ai law .
Posted by myu shadan at 9:28 PM No comments:
ကချင်-တရုပ် နယ်ခြား မှတ်တိုင်အမှတ်(၆) ပန်ဝါဒေသ ရှိ မျိူးချစ်ကချင် စစ်သည်တော်များ
photo by : Jade land ( facebook )
Posted by myu shadan at 8:28 PM No comments:
Posted by myu shadan at 8:26 PM No comments:
Posted by myu shadan at 8:25 PM No comments:
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ)။ ။ အစိုးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ရောက်ရှိနေကြသော ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မြစ်ကြီးနားရှိ ကချင်အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများ မရေရာသေးမီ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မပြုသေးရန် KIO အား အကြံပြုခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်သူတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ကချင်အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ မြစ်ကြီးနား ရပ်မိရပ်ဖများ၊ သဘာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများတို့ အပါအဝင် လူထု ၂၀၀ ခန့်နှင့် မနောကွင်း ခန်းမဆောင်တွင် နှစ်နာရီခန့်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ KIO ခေါင်းဆောင်များက အကြံဉာဏ်များ တောင်းခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by myu shadan at 8:20 PM No comments:
Posted by myu shadan at 9:49 PM No comments:
Youtube က video များကို Download လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ မိမိ Download လုပ်ချင်တဲ့ Link ကို ထည့်ပြီး download လုပ်ယုံပါပဲ။ အရမ်းလွယ်ကူတဲ့ အပြင် စောင့်စရာမလိုဘဲ ဆက်တိုက် Download လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြု နည်းကို အရင်က တင်ပေးထားပါတယ်။ ကဲလိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ် ယူလိုက်ပါ။
Zippyshare | Solidfiles | Ziddu | Sharebeast | Filecloud | Tusfiles | One2up | Fileswap | Mirrorcreator
Posted by myu shadan at 9:48 PM No comments:
Posted by myu shadan at 9:44 PM No comments:
ဒါကတော့ Photoshop CS5 Portable ပါ။ အရင်က တင်ပေးထားတာက 120 MB ကျော်ပါတယ်။ အခုဖိုင်ကတော့ 80 MB ကျော်လေးပဲ ရှိပါတယ်။ ဖိုင်ဖြေလိုက်ရင်တော့ 300 MB ကျော် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ သုံးလို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ထား လိုက်ပါ။ အခုလို portable လေးတွေ ရှိထားတော့ ကိုကြိုက်တဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်စရာမလိုဘဲ အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့။ အရေးအကြောင်းဆို portable လေးတွေက အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခု cs5 portable လေးက window 8 နှင့်ပါ အဆင်ပြေပြေ သုံးနိုင်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။
Ref : စာချစ်သူ
Posted by myu shadan at 8:22 PM No comments:
စစ်တိုက်ဝါသနာပါသူများအတွက်ပါ။ ဒီဂိမ်းလေးက တကယ်ကို ကောင်းလို့ တင်ပေးတာပါ။ စစ်တိုက်ဂိမ်းဖြစ်လို့ ဖိုင်ဆိုက်က ကြီးပါတယ်။ 201.73 MB တောင် ရှိပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ အဆင်ပြေမှ ဒေါင်းပါ။ ဖုန်းပျက်ရင်တော့ တာဝန်မယူ :P
Posted by myu shadan at 8:19 PM No comments:
Posted by myu shadan at 7:55 PM No comments:
တအိမ်ထောင် ကလေး ၂ ယောက် အမိန့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ဘင်္ဂါလီ(မွတ်စလင်)များအား တအိမ်ထောင် ကလေး နှစ်ယောက်ထက် ပိုမယူရန် ပြည်နယ် အာဏာပိုင်အဖွဲ့က အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း အပေါ် NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း ဝေဖန်ပြောကြား လိုက်သည်။ ယမန်နေ့က ကျင်းပသော NLD ဗဟို ကော်မတီ အစည်းအဝေးအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းထောက်များက ဘူးသီးတောင် မောင်တောရှိ မွတ်စလင်များ သားသမီး ၂ ယောက်ထက် ပိုမယူရန် အာဏာပိုင်များ၏ တားမြစ်ချက်နှင့် ပတ် သက်ပြီး မေးမြန်းရာတွင် ယင်းကိစ္စသာ မှန်ကန်ပါက ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဖြစကြောင်း ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည်က ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၉ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ရခိုင်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော် မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအရ ယင်း အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂါလီ ကလေးမွေးဖွားနှုန်း ထိန်းရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသ အာဏာပိုင်များက ဒီအမိန့် ထုတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မောင်းတောခရိုင်ထဲက မွတ်စလင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိသည့် ဘူးသီးတောင်မြို့နှင့် တောင်ပြိုလက်ဝဲ မြို့နယ်ခွဲများတွင်လည်း ယင်း ဒေသန္တရအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted by myu shadan at 7:33 PM No comments:
Posted by myu shadan at 7:11 PM No comments:
Thousands of Myitkyina residents welcome KIO delegates
Posted by myu shadan at 7:02 PM No comments:
Posted by myu shadan at 7:12 PM No comments:
ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ဝါသနာပါသူများအတွက်ပါ။ Android App ဖြစ်တဲ့ Camera FV-5 apk လေး သင့်ရဲ့ ရုပ်ပုံ လှလှလေးတွေကို ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်။ ။
Camera FV-5>> Download in Dropbox
Posted by myu shadan at 6:59 PM No comments: